Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 32)
Ihe oyiyi izizi nke Nokia C1 pụtara
Anyị enwetụla onyogho abụọ nke ihe ga - abụ Nokia C1 ekwentị dị ọcha gam akporo nwere ihuenyo 5-inch na Intel Atom mgbawa
Gluru, onye nwere ike ịbụ ezigbo onye inyeaka gị
Gluru bụ ọrụ ntanetị ọhụrụ na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka nke nwere ike ịghọ onye inyeaka gị mebere iji nye ozi kachasị mma.
Sony Xperia Z5, mbụ echiche
Anyị na-eme nyocha vidiyo nke Sony Xperia Z5 ebe anyị na-egosi gị ihe nzuzo niile nke ọhụụ ọhụrụ nke Sony
Lenovo Vibe X3 kpughere n'ụzọ zuru ezu
Lenovo Vibe X3 bụ ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo 5,5-inch, isi isii Snapdragon 808 na 3GB RAM.
Anyị na-enyocha vidiyo Samsung Galaxy Tab S2, mbadamba Samsung ọhụrụ nke nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ogo mechara.
Anyị na-enyocha vidiyo Samsung Galaxy S6 Edge +, ọhụụ ọhụrụ nke Edge dị iche iche nke pụtara ìhè maka mmecha ya na nha ihuenyo ya.
Huawei G8, mmetụta mbụ na vidiyo
Anyị na-ewetara gị vidiyo ebe anyị nyochara Huawei G8, ekwentị ọhụrụ nke Huawei nke kwụpụtara maka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya na akara aka kachasị elu.
Sony Xperia Z5 Premium, anyị nwalere ekwentị mbụ nwere ihuenyo 4K
Anyị na-enyocha vidiyo nke Sony Xperia Z5 Premium, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị Japan nke pụtara ìhè maka nnukwu ihuenyo 4K
Nexus 6 na-ewedata ọnụahịa ya rue 459 XNUMX
Google wedata ọnụahịa nke Nexus 6 ruo 459 29 tupu ọbịbịa nke ngwaọrụ Nexus ọhụrụ a ga-ewepụta na Septemba XNUMX.
Alcatel kpughere ekwentị Go Play na-enweghị mmiri na Go Watch
Ihe eji eme ihe na smartphone nke na-apụta maka asambodo IP67 ha nke na-enye nguzogide mmiri na ájá dị na IFA.
Alcatel na-ewepụta mbadamba Xessim iri na asaa ya na IFA
E gosipụtara Alcatel Xess na IFA dị ka ihe ngosi nke anyị na-ahụ mbadamba 17-inch nke chọrọ ịbụ ụlọ ọrụ multimedia n'ụlọ.
Acer Liquid Z: ndị ọhụụ ọhụrụ dị n'etiti na-abata na IFA
Ihe omume IFA ewetawo mmeghari ohuru nke otutu onu ogugu, n'ihe banyere Acer ha gosiputara uzo ohuru Acer Liquid Z.
Gam akporo Otu ga-ada na Spain na BQ
BQ bụ ụlọ ọrụ Spanish nke ga-ahụ maka ịmalite ihe gam akporo gam akporo na Spain na Septemba 17.
[APK] Street View na-enwere onwe ya na ngwa nke ya
Malite taa, Street View ga-apụta dị ka ngwa nke ya na drawer ngwa nke ngwa gam akporo gị.
Moto ọhụrụ 360 na Moto 360 Egwuregwu
Motorola ewepụtala akwụkwọ ọhụụ ya na ụbọchị mbụ nke IFA. Moto 360 ohuru nke nwere uzo abuo na nke egwuru-egwu, Moto 360 Sport.
Nke a bụ ọhụrụ Huawei G8
Huawei ekwuputala otutu akwukwo ohuru na ubochi mbu nke IFA 2015, nke Huawei G8 ohuru di iche, nke di n'etiti / ngwụcha.
Kpoo Huawei Watch, ihe ngosi maka € 399
Huawei Watch dị ugbu a maka ịzụta site taa maka € 399 na ụkpụrụ ntọala ya wee rute na ngosi IFA na Berlin.
Ihe niile gbasara Xperia Z5, Xperia Z5 kọmpat na Xperia Z5 adịchaghị
Sony na-ewetara anyị ihe atọ nke Xperia smartphones nwere igwefoto igwefoto kachasị na mbara ala, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ụbọchị abụọ nke ndụ batrị.
Nke a bụ Asus ZenWatch 2
Anyị na-aga n'ihu na akụkọ metụtara IFA na Berlin iji kwuo maka ASUS ọhụrụ, ASUS ZenWatch 2.
Nke a bụ Archos Diamond Plus
IFA 2015 dị na Berlin amaliteworị ma ọtụtụ ndị nrụpụta ewepụtala akwụkwọ akụkọ ha, dị ka Archos Diamond Plus ọhụrụ si Archos.
Acer Predator 8 GT-810, gosipụtara mbadamba nkume ọhụrụ maka ndị na-egwu egwuregwu
Anyị ahụworị ụfọdụ akụkọ, dị ka nwunye ọhụrụ S si Huawei ma ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke Acer nke juru anyị anya n'oge ngosi ya site n'igosi Acer Predator 8, mbadamba egwu.
Meizu ebipụtala akara ngosi ọhụụ ya na atụmatụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ a ga - ewe n’afọ ndị na - abịanụ, na - adị Apple karịa mgbe ọ bụla.
Huawei kwuputara na Mate S
Huawei wetara anyị ekwentị dị elu nwere ihuenyo 5,7 nke anụ ọhịa maka € 649, Mate S nke ekwuputala na IFA.
KinoConsole iyi gị PC egwuregwu na gị gam akporo ngwaọrụ
Wụnye ihe nkesa na PC gị na ngwa na mkpanaka gị ma ị ga-adị njikere ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị mma na ihuenyo nke smartphone gị na KinoConsole.
[APK] Instagram 7.5 na-eme ka mmelite di iche iche na-eduzi ozi
Ugbu a Direct ka emeziwanye maka ozi izizi sitere na Instagram ka o wee kesaa onyonyo na-enweghị efunahụ mkparịta ụka ahụ
[APK] Ihe emelitere Google ngwa nwere akara ngosi ọhụụ, akara ngosi na interface nwetụrụ ihu ọma
Google emelitewokwa ngwa nyocha na ihe ohuru ohuru na agba ndi ahu ugbu a na Google Ugbu a.
Google weputara akara ohuru
Google toro eto nke ukwuu kemgbe ọ bidoro. Ugbu a ụlọ ọrụ America na-egosipụta akara ọhụụ.
Paypal.me ma ọ bụ kedu ụzọ kachasị mfe iji nye ma ọ bụ nata ego
Paypal.me bụ ọrụ Paypal ọhụrụ iji mepụta ibe nke gị ebe ị nwere ike ịnata ego wee si otú a kwado nyefe ego.
Google Maps na-ewetara anyị akụkọ metụtara interface igodo ụzọ gara aga na eserese ọhụụ iji mara awa nke ọtụtụ nsị nke ọha na eze
Leaked video egosi Sony Xperia Z5 Premium na 4K ngosipụta na ebube ya niile
Sony Xperia Z5 Premium bụ mgbakwunye ọhụrụ nke ndị nrụpụta Japan iji nye onye ọrụ ọkwa kachasị elu na ihuenyo yana 4K
Quickpic nke Cheetah Mobile zụtara, ọdachi
Cheetah Mobile bụ onye nrụpụta na-agbakwụnye ọtụtụ adware na mgbasa ozi na ngwa ya, ọ nwetawo QuickPic dị nsọ.
LG Watch Urbane Luxe, ihe ngosi ọla edo 23 karat maka $ 1.200
A mbipụta pụrụ iche nke LG Watch Urbane bịarutere na mbipụta Luxe na ọla edo 23 na ọnụahịa nke dollar 1.200 maka nkeji 500.
Blackberry Venice ga-enwe ihe ngosi keyboard QWERTY
BlackBerry mbụ gam akporo ekwentị mkpanaaka nwere ike ịnwe anụ ahụ, slide-out QWRTY keyboard.
Nke a bụ Elephone M2 na ihe mmetụta mkpịsị aka
Elephone M2 bụ ọnụ ahịa kachasị elu sitere na ndị nrụpụta ụlọ ọrụ China a.
Emelitere Instagram ma ugbu a na - enye gị ohere bulite onyonyo na vidiyo na ọdịdị ihu na eserese
Instagram juru anyị niile anya site na ike ibugo onyogho na vidiyo na nhazi ihu na eserese, na-asị ihe fọrọ nke nta ka ọ dabaa na usoro akụkụ.
Obi Worldphone, ika nke mbụ Apple CEO John Culley na-enye ya mbụ abụọ smartphones
Obi Worldphone bụ nzọ nke onye isi Apple CEO ogologo oge ga-ewepụta ọdụ abụọ na ahịa ndị na-apụta n'ahịa dị ọnụ ala na nnukwu imewe.
Facebook M bụ azịza Mark Zuckerberg na Google Ugbu a, Siri, na Cortana
Facebook achọghị ịda n'ala n'ihe bụ olu enyemaka dịka Siri ma ọ bụ Google Ugbu a ma kpughee M, nke a ga-ewebata na ozi
Ihe kacha mma gam akporo smartphones na-egwu
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu na ekwentị mkpanaaka, taa anyị na-ewetara gị nhọrọ nke kacha mma gam akporo smartphones na-egwu
Egwuregwu YouTube bụ nnukwu nzọ nke Google iji gaa n'isi na isi megide Twitch, ọrụ ntanetị na-aga n'ịntanetị maka egwuregwu vidio.
Doogee na-enye Doogee X5 Pro
Anyị na-aga n'ihu na-ekwu maka ndị ọnụ ahịa si mba Eshia iji kwuo maka ọnụ ụzọ Doogee ọhụrụ, ndị Doogee X5 Pro.
A na - ewepụta nkọwa ọhụụ nke Nexus 5 dị iche na nke ndị ama ama
Nexus 5 nke Google ga-ewepụta na Ọktọba ma ọ ga - abịa na ọhụrụ gam akporo 6.0 Marshmallow melite.
Ndị mmekọ Cyanogen na WileyFox ka ha wepụta Smartphones abụọ dị na Europe, Africa na Middle East
Ndị mmekọ Cyanogen na WilleyFox nke ga-ebupụta igwe elekere abụọ dị n'etiti yana ezigbo ngwaike yana ọnụahịa ọnụ.
Link Afọ nchọgharị na weebụ na-kpam kpam free
Link Afọ bụ otu n'ime ngwa ọdịnala anya nke kachasị n'oge na-adịbeghị anya n'ihi iji mmiri na-ese n'elu mmiri maka itinye na ndabere.
Yiri gị gam akporo ama ihuenyo gị PC ma ọ bụ Mac na Vysor
Na kọmputa gị ị nwere ike yiri enyo ekwentị gị na ọrụ ọhụrụ nke Koush kere nke a na-akpọ Vysor
Cortana olu nnyemaka beta beta dị na Google Play
Microsoft na-eme ihe ya ma na-ebupụta beta ọha na Cortana na United States site na mmemme beta na programlọ Ahịa Play.
Samsung Galaxy Note 5 nwere a imewe ntụpọ nke nwere ike na-adịgide adịgide imebi ya
Samsung nwere nsogbu na S Pen na Galaxy Note 5 n'ihi ya, ọ ga-edozi ya n'ụzọ ụfọdụ tupu ya erute Europe
Samsung Galaxy Rịba ama 5 na S6 Edge Plus ọtụtụ okwu
Nsogbu ohuru na otutu ihe na Samsung Galaxy Note 5 na S6 Edge Plus, ihe ojoo di egwu.
ASUS weputara uzo puru iche nke Zenfone 2 na Brazil ya na 256GB nchekwa
ASUS ga-ebupụta na Brazil ụdị pụrụ iche nke Zenfone 2 na 256 GB nke nchekwa dị n'ime nke na-ewe smartphone a na nsogbu ndị ọzọ.
LG mara ọkwa G Pad II 10.1 na Snapdragon 800 mgbawa, 2GB RAM na mkpebi 1920 × 1200
Ihe ngosi IFA ga-abụ ihe omume ebe onye Korea na-emepụta LG ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ ya, mbadamba G Pad II 10.1 na Snapdragon 800 chip na 2GB nke RAM.
Android na-amasị gam akporo? Lee ị nwere ahịa ahịa kachasị mma ịnakọta
Dị ka ndị ọrụ gam akporo gam akporo na-achọsi ike, ebe a anyị na-egosi gị ụlọ ọrụ gọọmentị niile ịzụrụ ha na weebụsaịtị ndị dị ọnụ ala karịa.
Xender, ịnyefe faịlụ adịbeghị mfe
Ihe ọhụrụ Xender na-enye gị ohere ịnyefe faịlụ n'ụzọ zuru oke na nke ọma site na ama gị na kọmputa ma ọ bụ ọnụ ọzọ.
Foto Google ga-echetara gị foto ị sere n'oge gara aga
Foto Google, site na inye gị ikike, ga-eweta ụfọdụ onyonyo nke ihe dị iche iche mere n'oge gara aga dịka Facebook na-eme na netwọkụ mmekọrịta ya.
Blackberry Venice, Blackberry mbụ nwere gam akporo, nwere ụbọchị ọrụ na onyogho
Blackberry nzo na gam akporo ma meputa smartphone na sistemụ nrụọrụ a dịka ọkọlọtọ. Amatala ụfọdụ atụmatụ na ụbọchị ịwepụta.
Microsoft dị n'ihu Google nke nwere ụdị nke 'Google Now on Tap' na nchọta Bing
Ejirila atụmatụ Bing Microsoft jiri ihe ọhụrụ "depụtaghachiri" site na Google na "Google Ugbu a na Mgbata" na-ebupụta ọchụchọ dabere na ọnọdụ
ASUS iwebata ama na smartwatch na IFA 2015
Asus ekwuputala nnọkọ ogbako maka Septemba 2 na-esote na usoro nke IFA na Berlin.
Nke a bụ BlackBerry Venice, mbụ Blackberry ekwentị na gam akporo
New oyiyi nke BlackBerry Venice na-leaked, na Blackberry ngwaọrụ na-arụ ọrụ na gam akporo
OnHub, nzọ ahụ dị ka router nke Google
Google weputara OnHub rawụta nke etinyegoro na njikọ ikuku n'agbanyeghị na o nwere atụmatụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Blackphone 2 dị maka iwu, a ga-ewepụta ya na Septemba
Septemba bụ ọnwa nke a ga-ewepụta Blackphone 2 ọhụrụ, ọnụ na-akwado nchekwa na nzuzo.
Fosil na-egosipụ ya Wear smartwatch nke Intel na-arụ ọrụ
Fosil ụdị ejiji na-eji Intel's developer ogbako iji gosipụta smartwatch mbụ ya n'okpuru gam akporo Wear.
Samsung kwadoro nhọpụta ya maka IFA 2015: Septemba 3
A gụrịrị ya, enwegorịrị maka IFA 2015, yabụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite ịkpọ ndị nta akụkọ, dị ka ọ dị na Samsung.
Project Ara na-egbu oge na 2016
Ọ bụ ezie na anyị chere na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ebido ịmalite ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri Project Ara, anyị ga-echere ya.
Hangouts nwere ọrụ weebụ ya ugbu a
Ọrụ izipu ozi Google, Hangouts, nwere weebụsaịtị ọhụrụ iji nwee ike ịme na / ma ọ bụ soro mkparịta ụka na kọntaktị kachasị amasị anyị.
NUCLUN 2, LG ọhụrụ SoC dị ike karịa Samsung’s Exynos 7420
A na-agbapụta akara ngosi nke NUCLUN 2, SoC ọhụrụ sitere na LG na-emepụta LG nke ọ na-ezube ịsọ asọmpi Exynos nke Samsung.
GooglePlex na-akwadebe maka ihe oyiyi ọhụrụ nke gam akporo M
Thelọ ọrụ nke Google ma ọ bụ nke a makwaara dị ka GooglePlex, na-akwadebe ịnata ihe oyiyi ọhụrụ nke gam akporo M, nke a ga-ekpughere n'oge na-adịghị anya.
Ọmụmụ ihe na-ekpughe na na 2015, 50% nke ọnụ ahịa ndị e rere karịrị 5 sentimita
Nnyocha na-ekpughe na n'oge nkeji iri abụọ na abụọ nke 2 a, 2015% nke ọnụ ndị e rere bụ sentimita 50 ma ọ bụ karịa.
Xiaomi mebiri ndekọ ọzọ site na iji 800.000 nkeji nke Redmi Rịba 2 na awa 12
Xiaomi emeela ya ọzọ na nkeji 800.000 rere nke Xiaomi Redmi Rịba ama 2 naanị n'ime awa 12. Ihe ndekọ ọhụrụ maka ndị na-emepụta China.
A na - ewepụta ihe oyiyi nke Google Nexus 5 ọhụrụ
Ihe oyiyi mbụ nke ihe ga-abụ Google Nexus 5 ọhụrụ maka afọ a agbaala. Ekwentị echere ogologo oge site na ọtụtụ ndị ọrụ.
ZUK na-egosi uzo ngosi uzo ya maka smartphones
ZUK ekpughere ngosipụta ihuenyo ọhụụ ya. A ihuenyo anyị nwere ike ịhụ na afọ ọ bụla ama.
New Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ọnụọgụ adịghị mkpa?
Couplebọchị ole na ole gara aga, e gosipụtara Samsung Galaxy S6 Edge Plus ọhụrụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ejima nwanne Edge ma nwee nnukwu ibu.
Evernote buputa ohuru nke Evernote Web interface
Evernote fọrọ nke nta ka ọ gbanwee mmelite websaịtị nke ọrụ ntinye akwụkwọ ama ama ga-amalite n'izu na-abịa.
Yahoo Livetext dị ugbu a maka onye ọ bụla
Yahoo's Livetext na-anọchi anya maka ịbụ ngwa nke na-enye ikike iji nkwurịta okwu site na ozi ederede na ozi vidiyo mana na-enweghị ọdịyo.
Samsung Galaxy Note 5 agaghị ekesa na Europe
Ọ bụ ezie na ọ dị ka akụkọ dị egwu, Samsung Galaxy Note 5 agaghị ekesa na Europe ịkụ nzọ naanị na Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Google weputara ihe nlere nke gam akporo iji gosiputa ihe ohuru ohuru nke Android na Android wear
Site na nyocha nke Android ị nwere ike ịbịaru nso na ngwa ndị ọhụrụ na-emepe emepe nke ị nwere ike iburu koodu maka nke gị.
Wepu akara agwa 140 maka ozi ozigbo na Twitter
Twitter mepee ụzọ maka onye ọrụ ọ bụla iji zipu ozi ziri ezi na oke karịrị mkpụrụedemede 140.
Amazon laghachi na ọgụ ahụ na ngwugwu ọzọ nke ngwa na egwuregwu efu bara uru na € 90
Amazon na-eweta ngwugwu ngwa ngwa na egwuregwu vidio dị oke ọnụ na € 90 nke anyị nwere ike ịchọta nnukwu Ewu Simulator dị ka otu n'ime ihe kachasị mma.
A ga-ewepụta Huawei Mate 7s n'oge IFA 2015
Huawei nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ echepụtara maka IFA 2015 na Berlin. Otu n'ime ha bụ ọdụ na-esote, Huawei Mate 7s nke a ga-ewepụta na ngosi ahụ.
LeTV rere 1 nde smartphones na ihe na-erughi ọnwa 3
Lelọ ọrụ LeTV rere 1 nde ekwentị n'ime ihe na-erughị ọnwa 3, karịrị akara ọ bụla ruo ugbu a.
Elephone M2, Elephone kacha adịchaghị ọnụ
Dị ụlọ ahịa dị na Hong Kong na-eju anyị anya ọzọ site n'igosi ọdụ ọhụrụ ya. Ọ bụ Elephone M2, Elephone kacha adịchaghị ọnụ.
Facebook na-akwadebe mwepụta nke ngwa ọhụrụ maka ọkwa akụkọ
Facebook na-emepe ngwa nke nwere nnukwu ike mana ọ dị mfe ijide akụkọ kachasị ewu ewu.
Microsoft OneNote bụ ihe ejiri “mmanya na-ese n’elu mmiri” wee mepụta ndetu ngwa ngwa mgbe ị na-eji ngwa ọzọ
A na-emelite OneNote site na mgbakwunye na ọ pụtara ogwe na-ese n'elu mmiri iji mepụta ngwa ngwa mgbe ị na-eji ngwa ọzọ.
LastPass na-enwere onwe gị mana ị ga-akwụ ụgwọ iji gbanwee site na ekwentị gaa na mbadamba nkume ma ọ bụ PC
LastPass bụ n'efu, ọ bụ ezie na ịchọrọ ịga site na ekwentị gaa na mbadamba / PC ị ga-akwụ ụgwọ.
OnePlus 2 na nsogbu ọzọ: nnyefe oge
Companylọ ọrụ OnePlus 2 na-esite n'otu nsogbu gaa na nke ọzọ, ugbu a mkpesa banyere ihe ndị na-egbu oge na nnyefe nke njedebe na US Mgbaghara bụ ọha na eze.
Nke a nwere ike ịbụ nke mbụ Huawei ama na a curved ihuenyo
Huawei nwere ike igosi ya na ọnwa ndị na - abịanụ ihe ga-abụ smartphone mbụ nwere ihu ihuenyo na akụkọ ihe mere eme.
Nextbit, a adịchaghị ama si mbụ Google, Apple na HTC ọrụ
Nextbit bụ ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ mbụ nke Google, Apple, Amazon na HTC ndị ga-eweta ekwentị mbụ ha na Septemba 1.
Pushbullet na-enye nkwado ngwụcha ngwụcha na njedebe na ọkwa, Universal Detuo & Tapawa na SMS
Pushbullet na-enyezi nkwado ezoro ezo na ngwụcha maka mirroring, SMS, yana Universal Detuo & Tapawa ọkwa. New version lekwasịrị anya nche.
Kedu ihe na-echere anyị na YouTube Gaming
Abụọ abụọ dị arọ ga-eche ibe ha ihu ugbu a site na ugbu a maka iyi egwu na egwu egwu. Ndị a bụ Egwuregwu YouTube na Twitch.
Vulkan, atụmatụ Google iji melite eserese na egwuregwu vidiyo na gam akporo
Na Vulkan a na-atụ anya na ọ ga-enwe ike ịkọwa ọnọdụ dị mgbagwoju anya ma belata ojiji nke CPU iji nweta arụmọrụ ka mma na okpokolo agba.
Google nhazigharị zuru oke n'ime Mkpụrụ Okwu ma họpụta Sundar Pichai CEO
Ugbu a Google bụ akụkụ nke nnukwu ụlọ ọrụ a maara dị ka Alphabet na nke ga-ebupụta ọrụ niile agbanweela na ụlọ ọrụ.
Ọtụtụ teas nke Honor 7i na-leaked
Anyị amatala aha enigmatic Honor ekwentị nwere igwefoto na-ese ihe: Honor 7i
Otu ekwentị Samsung enigmatic ruru ihe ruru 95.972 na AnTuTu. Samsung Galaxy S7 na Snapdragon 820?
Samsung ekwentị enigmatic na-enweta akara dị egwu na AnTuTu. Ọ ga - abụ Samsung Galaxy S7?
New leaked oyiyi nke Samsung Galaxy Note 5 na Galaxy Edge +
A usoro nke ọhụrụ oyiyi e leaked egosi na imewe nke Samsung Galaxy Cheta 5 na Galaxy Edge +
[APK] Ugbu a dị Hangouts 4.0 na ngụkọta mmeghari ohuru ya na Ihe Ekike na ọtụtụ ndị ọzọ
Hangouts 4.0 na Design Design na ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ dị ugbu a. Budata APK iji nwalee ozugbo.
Joaquim Vergès sonyere ndị otu Twitter iji melite ngwa gam akporo
Twitter ga-enwe n'etiti ọkwa ya otu n'ime ndị nrụpụta ngwa ngwa kachasị mma na netwọkụ mmekọrịta ama ama.
Ntinye n'ime na-egosi ule arụmọrụ nke Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 na gam akporo M n'okpuru ogwe aka
Leaking ihe Samsung akwụkwọ na-egosi Samsung Galaxy S7 a nwalere ya na Snapdragon 820 SoC
Huawei nwere ama ejikere maka IFA nke abụghị Nwunye 8
Onye ọ bụla na-atụ anya ka Huawei weta onye ọhụụ ọhụrụ 8 n'oge IFA na-esote, mana agbanyeghị, onye nrụpụta China ga-eweta ngwaọrụ ọzọ na ngosi.
Gam akporo na-agba ọsọ na Blackberry Passport ọhụrụ
Enweela ọtụtụ asịrị na ụlọ ọrụ Blackberry nwere ike ịmalite ngwaọrụ gam akporo ya.
Mbadamba Nokia N1 mechara rute Europe
N’ikpeazụ anyị nwere ike ịzụta Nokia N1 na Europe. Mbadamba Nokia ọhụrụ na-abịa na ọnụahịa nke euro 314 tinyere euro 20 nke ụgwọ mbupu
Meizu MX5 Pro nwere ike iwekota ihe Exynos 7420 processor
Na ngwụcha ọnwa Juun anyị na-egosi gị Meizu MX5, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta Eshia. Ruo mgbe egosiri Meizu MX5 Pro. Ma ọ bụ na obere obere obere ihe nzuzo nke ọzọ Meizu titan na-ekpughe. Ikpeazụ? Na Meizu MX5 Pro nwere ike gbagoo Exynos 7420 processor.
Storelọ ahịa dị na Middle East na-enyocha njirimara niile nke teknụzụ nke Galaxy Note 5 na S6 Edge +
Jarir, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ere na Middle East, ebipụtala usoro mgbasa ozi na-egosi ...
HD na 3D ama? Anyị na-ewetara gị VKWorld Discovery S1
Ọchịchọ ịmata ihe VKWorld Discovery S1. A ọnụ na a elu definition ihuenyo, 3D na-enweghị iko.
Wii M ma ọ bụ ihe ga-abụ Nintendo mobile na gam akporo
Nintendo fans nrọ nke ụlọ ọrụ otu ụbọchị launching ihe gam akporo ama. Taa, anyị na-egosi gị Wii M, a echiche nke otú mobile nwere ike ịbụ.
Ebumnuche Apple fanboys na Android kwenyere na ọ bụ ụdị ọhụrụ nke iOS 9
Dika egosiputara na vidio a, o gha eju Apple fanboys na ohere ndi gam akporo Lollipop nyere iji mebie nke iOS ha huru
Ihe Maps YouTube, ma ọ bụ otu esi achọpụta vidiyo esitere na ebe ọ bụla n’ụwa
YouTube Maps Explorer bụ ngwa weebụ na-enyere anyị aka ịmata vidiyo ndị a na-ebugo na YouTube na mpaghara ọ bụla nke maapụ.
Xiaomi na-akwadebe ndị nhazi ya nke ga-abata na 2016
Xiaomi ga - eweta ndị nrụpụta nke ya site n’afọ na - esote. Ebe mbu ndị SoC ndị ọhụrụ a ga - ebu ga - abụ nke Redmi.
Chọrọ ịzụta Samsung Galaxy S6 Edge dị ọnụ ala? ugbu a ọ na-efu euro 699
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ọnụ ala Galaxy s6 Edge dị ọnụ ala ugbu a bụ oge gị: Samsung belata ọnụahịa nke Galaxy S6 Edge site na euro 150, ugbu a na-efu euro 699
ZTE Blade V6 na eze n'ihu
Onye na-emepụta ihe na China bụ ZTE ewepụtala ọdụ ụgbọ mmiri ya ọzọ nke a ga-ebupụta na Spain dị ka ụwa mbụ, ọ bụ ZTE Blade V6.
A na-edozi ọhụụ ọhụrụ C5 Ultra na Xperia M5 tupu ha ewepụta ha
Abụọ ọhụrụ Sony, Xperia C5 Ultra na Xperia M5, agbapụla awa ole na ole tupu ngosi ha
WhatsApp ga-agụnye emoticon nke Valencian paella
N'oge na-adịghị anya WhatsApp ga-agụnye emojis ọhụrụ 15, gụnyere nke na-anọchite anya akụkọ ifo Valencian paella. A ga-etinye ya maka arịrịọ ndị ọrụ.
A na-emegharị onye ntụgharị Google ka ọ nwee asụsụ 26 dị ugbu a maka ntụgharị nsonye
A sụgharịrị Google Translate na asụsụ ndị ọzọ. Enwere asụsụ 26 dị ugbu a maka ọrụ a site na Mountain View.
OnePlus 2, ọhụụ "flagship killer" kpughere
Edeelarị OnePlus 2 yana akwụkwọ akụkọ ya niile na ederede a anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha.
#Paellaemoji ma ọ bụ otu Valencian Paella si abanye na WhatsApp
N'ime ndepụta nke emoticons ọhụrụ iji tinye, nke nke Valencian Paella na WhatsApp ka agbakọọla.
Google mma nhọrọ beta nyere ndị mmepe na Storelọ Ahịa Play
Google na - enye ndị nrụpụta nhọrọ ndị ọzọ ka ndị ọrụ wee nwalee betas nke ngwa ha site na Storelọ Ahịa Play.
A ga-egosipụta LG G Flex 3 na Machị wee rute Snapdragon 820
A na-agbapụtalarị njirimara niile nke LG G Flex 3, LG ga - ebute ụzọ ọhụụ a ga - ewepụta na Machị
Mbadamba ụrọ na-amalite ịjụ, njedebe nke afụ ahụ?
Mbadamba ụrọ na-agbada n'ihi ụba nke ihu ekwentị
A ize ndụ ọhụrụ oghom flaw nwere ike ime ka ekwentị gị na-abaghị uru ruo mgbe ị Malitegharịa ekwentị
Achọpụta ihe ọhụụ ọhụrụ na gam akporo nke arụ ọrụ site na vidiyo na usoro MKV na-akpaghasị ya na nke na-emetụta ọkara nke ngwaọrụ ahụ
E nwere obere ihe fọdụrụ maka August 13 na-esote, ụbọchị a na-atụ anya Samsung iji weta Samsung Galaxy Note ọhụrụ 5. Nke nta nke nta ekpughere ụfọdụ ihe nzuzo nke onye ọhụụ ọhụrụ nke ezinụlọ Cheta ma ugbu a anyị na-ewetara gị ihe oyiyi ọhụrụ .
Hangouts 4.0 na-egbu oge mana ọ bụ ezi ihe kpatara ya
Ndị ọrụ gam akporo Wear ga-erite uru dị ukwuu na Hangouts 4.0 dị ka anyị mụtara taa.
Akụkọ banyere WhatsApp: mmalite, mmalite na rụzuru
Anyị na-agwa akụkọ banyere ngwa izipu ozi izizi, WhatsApp. Site na mbido ya tupu gam akporo gaa ire ya na Facebook na mmelite n'ọdịnihu.
Yahoo weputara Livetext, ngwa izi ozi ohuru nke jikọtara vidiyo na-enweghị ọdịyo na ozi ederede
Na Yahoo Livetext ị ga-ekwurịta okwu na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị na ederede na vidiyo, mana nke a na-enweghị ọdịyo ka mkparịta ụka ahụ ga-abụ ihe ọzọ.
Samsung ga-ebelata ọnụahịa nke Galaxy S6 na S6 ihu
Na ụfọdụ enweghị ezigbo ọnụ ọgụgụ na ahịa, Samsung ga-ebelata ọnụahịa nke Galaxy S6 na S6 ihu. Ole na ole ole na ole ụbọchị ole na ole tupu Unpacked Omume.
Nzacha azụ nke New Nexus 5
Anyị amaliteworị site na asịrị na ntapu mmiri, na nke a OnLeaks ekpuchiela azụ nke Nexus 5.
Qualcomm Wipower wetara Ikuku Nchaji na Metal Isi ekwentị na mbadamba
Otu nsogbu nke ekwentị ndị na-ejikọ ahụ igwe bụ na ha enweghị ike iji chaja ikuku: akụkụ igwe ha ga-ekpo oke ọkụ, nke kpatara ya rue ugbu a ọ gaghị ekwe omume iji sistemu a. Luckily Qualcomm abiarute ya na WiPower.
Sony nwere ike iweta Xperia Z5 + na Machị
Akụkọ asịrị ọhụrụ na-egosi na Sony nwere ike iweta Xperia Z5 + na Machị. Ọnụ nke ga-apụta maka atụmatụ ya dị ike.
YouTube agaghị ajụ onye ọrụ maka profaịlụ Google+ ka bulite, kwuo ma ọ bụ mepụta ọwa
Mgbanwe mbu ga - abụ akwụkwọ nke nkwupụta na YouTube na - apụtaghị na Google. N'ime ọnwa ole na ole sochirinụ, ị gaghị achọ Google.
Samsung kwupụtara mmemme Unpacked maka August 13 na ngosi nke Galaxy Note 5 na S6 Edge Plus
Na mmemme Samsung Unpacked na August 13, Samsung Galaxy Note 5 na Galaxy S6 Edge plus ga-ekpughe.
Nke a ga-abụ S-Pen nke Samsung Galaxy rịba ama 5
Anyị enweela ike ịhụ otú S-Pen nke Samsung Galaxy Note 5 ga-adị, ihe dị mkpa na phablets nke onye nrụpụta South Korea na nke ahụ ga-apụta maka ihe eji wuo ya.
Instagram na-anwale onye editọ foto ọhụrụ iji mee ka ịkekọrịta dị mfe
Ihe nhoputa ihe oyiyi ohuru bu ule ohuru nke Instagram ka odi nfe ikesara onyonyo site na netwok.
A ga-ahapụ ụlọ nchekwa Fallout na gam akporo na August 13
August 13 bụ ụbọchị nke Bethesda Studios họọrọ n'onwe ya maka mwepụta nke Fallout Shelter na gam akporo na agwa ọhụrụ na ndị iro.
Honda na-akpọsa ụgbọ ala mbụ ya na gam akporo Auto
2016 Honda Accord bụ ụgbọ ala mbụ sitere na igwe nrụpụta a iji gosipụta gam akporo Auto iji weta ahụmịhe gam akporo zuru oke n'okporo ụzọ.
Emegharịrị YouTube karịsịa maka ndị na-emepụta ọdịnaya ma ọ bụ youtubers
YouTube na-anata a ọhụrụ version nke na-emesi ike na ọhụrụ ọhụrụ na taabụ na mbata nke ọtụtụ ngwaọrụ maka edezi vidiyo.
A na-ehichapụ ihe oyiyi mbụ nke Samsung Galaxy Note 5
Anyị nwere foto mbụ nke Samsung Galaxy Note 5 na ọhụrụ Galaxy S6 ihu +, nke nwere ike ikwenye mbata ha maka August 13.
Mgbasa ọzọ nke 'Grand Tournament' nke Hearthstone rutere n'ọnwa Ọgọst
Blizzard akwadebela mmeba ọhụụ 'The Great Tournament' maka Hearthstone ịmalite na August
Sony Concept for Android - Pure Android na nwa afọ Sony ngwa ọdịnala na atụmatụ
A dị ọcha gam akporo na-echere gị n'akụkụ nkuku na Xperia Z3 na ọhụrụ 'Concept for Android' si Sony.
Google gafere bọtịnụ FAB wee gbanwee ya na mkpirisi ụzọ mkpirisi na Google Keep
N'ime ngwa ntinye akwụkwọ, Google dochiri bọtịnụ FAB, nke jiri gam akporo Lollipop bịa, jiri ogwe ngwa ngwa.
Yoigo ga-ewepu SinFín ọnụego na Septemba
Yoigo nwere ike iwepu SinFín ama ama na katalọgụ ya na ọnwa Septemba ọ bụla n'ihi enweghị uru ọ bara
[APK] You nwere ike ịhụ vidiyo vidiyo n'ụzọ doro anya na YouTube
N'ikpeazụ, anyị nwere ike igwu egwu vidiyo ndị ahụ jọgburu onwe ya nke ọma maka nsụgharị ọhụrụ nke YouTube na gam akporo.
[APK] Google Maps 9.2 na-agbakwụnye usoro oge nke ebe ndị ị gara
Google etinyela oge nke akụkọ ihe mere eme nke ọnọdụ dị na Google Maps dị ka nnukwu ihe ọhụụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya maka ọrụ maapụ ya.
SNK's summer sale na 11 ochie na € 0,99 nke ọ bụla
SNK nwere nnukwu egwuregwu vidiyo dị na inlọ Ahịa Play nakwa na ọ na-eme ka a na-ere ahịa n'oge ọkọchị na ego nke € 0,99
A na-emelite Adobe Lightroom na mbipute 2.1 na ntọala oyiri, interface dị mma na ndị ọzọ
Ewezuga atụmatụ ọhụrụ ọhụụ atọ, ụdị 2.1 nke Adobe Lightroom na-abịa na ọtụtụ ndozi ahụhụ.
Versiondị Telegram ọhụrụ ahụ na-ejikọ YouTube, Vimeo na SoundCloud n'ime nkata ahụ
Telegram gụnyere YouTube, Vimeo na Soundcloud dị na nkata dịka isi ọhụụ na ụdị ọhụrụ ahụ.
Ihe anyị nwere na gam akporo yana onye enyemaka olu Cortana
Cortana bụ Windows 10 olu nnyemaaka na-abịa na Android na beta ma nwee ọtụtụ nhọrọ karịa atụ anya ya.
Samsung kwupụtara Galaxy Tab S2 8.0 na Galaxy Tab S2 9.7
Onye na-emepụta Korean nke Samsung enweworị mbadamba nkume ọhụrụ abụọ maka ọnwa na-abịa na Galaxy Tab S2 8.0 na Galaxy Tab S2 9.7.
Ikori ozi ịntanetị n'ụzọ dị mfe bụ ihe dị ọhụrụ na Igbe mbata
Igbe mbata na-enye ohere itinye oge ịntanetị na-eyigharị ozi n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe nke na-agba ọsọ ngwa ngwa n'ụzọ niile. Obere ihe di nkpa.
Plex emelitere na 4.6 site na iji ihe eji eme ihe na ihe ohuru
Plex bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma iji kpọọ ọdịnaya dị na multimedia na ekwentị gị ma ọ bụ na Smart TV gị.
Ihe ndị a bụ onyinye na-adọrọ mmasị nke mgbasa ozi Media Markt Mobile Mania
Taa, anyị na-ewetara gị ụfọdụ onyinye kacha mma sitere na Mobile Mania si Media Markt, nkwalite na-ejedebe na July 22, 2015.
Rovio kwuputara nnụnụ iwe 2 maka July 30
July 30 bu ubochi Rovio choputara iwepu ndi nnụnnụ nnụnụ 2 na gam akporo. Nnụnnụ ọhịa ọzọ na ekwentị gị.
Pushbullet maka gam akporo na-enweta nkwado zuru oke maka ozi SMS
Pushbullet abanyela nkwado zuru oke maka ozi SMS na gam akporo na desktọọpụ nsụgharị.
Ajụjụ nke bọtịnụ: nke ọhụrụ sitere na Google maka mgbasa ozi gị na nke ọhụrụ si Facebook maka ibe gị
Google ga-agunye bọtịnụ ịzụta na nsonaazụ ọchụchọ ịzụta na Facebook ga-agụnye otu na ibe nke netwọkụ mmekọrịta ya ama ama.
Evleaks na-enyocha nkọwa nke Huawei Nexus: 5,7 ″ QuadHD ihuenyo, Snapdragon 820 mgbawa na metal ahụ
Huawei na-emepụta Nexus ọhụrụ nke ga-abata na nkeji iri na ise nke afọ na ihuenyo 5,7 nke anụ ọhịa na mkpebi QuadHD.
Amazon Premium Day, taa bụ ụbọchị ịzụ ahịa ụwa na onyinye dị mma
Taa July 15 bụ Amazon Premium Day, ụbọchị zuru oke iji nweta ọnụahịa nzuzu n'ezie na nke anyị na-ahụ ọnụego gam akporo mbụ.
Twitter na mgbanwe uche ya nye ndị mmepe nke atọ
Twitter nwere oge siri ike na ndị mmepe nke atọ na-eke ndị ahịa Twitter. Ugbu a ọ chọrọ ka ha mechie ọzọ.
Skype 5.5 na-eweta nbanye dị mfe na njikọ nlele na nkata
Ọhụrụ 5.5 nke Skype na-eweta ụzọ dị mfe iji banye na ihe ga-abụ njikọ ndị gara aga na nkata.
Mozilla na-egbochi ụdị Flash niile na Firefox
Otu mbanye anataghị ikike eji ihe ọkpụkpọ Flash Player banye n'ime kọmputa ndị ọrụ. Mozilla blọọ Flash na Firefoz ruo ụdị ọhụrụ.
Nokia na-achọ onye nrụpụta ga-ejikwa ya mepụta nrụpụta, nkwado, ahịa na nkesa maka nlọghachi ya.
Nokia HERE Maps ọha beta wepụtara na gam akporo
Nokia HERE Maps nwere ihu ọha ya nke ọ bụla na-eji gam akporo ọ bụla nwere ike ịnweta iji nweta akụkọ ha kachasị ọhụrụ.
Edere nkọwa ndị ọzọ banyere 5 Galaxy Note: 4GB RAM, 5 MP OIS n'ihu igwefoto ...
A ga-egosiputa 5 Galaxy Note n'etiti ọnwa Ọgọstụ dị ka asịrị kachasị ọhụrụ. Ekwentị nke ga - abịa site na sistemụ "niile-in-one".
A na-emelite Twitch na windo windo na-ese n'elu mmiri yiri YouTube
Ẹkedori a mmiri na-ese n'elu mmiri na playback nke ọwa na Twitch na mmelite ọhụrụ mgbe ị na-eme ihe ọzọ na ekwentị gị.
Nwere ike izipu adreesị Google Maps na ngwa gam akporo gị na kọmputa gị
Nwere ike izipu adreesị nyochare na nsụgharị desktọọpụ Google Maps na ngwaọrụ gam akporo gị
Etu ị ga - esi mee ka ihu mmadụ nwee ihu ọma maka foto Google
Anyị na-egosi gị otu esi enyere ngwaọrụ a na foto Google site na mpụga United States ka foto gị hazie ma kpado onwe ha.
LG G4s, nwanne nwoke ohuru nke ezinụlọ G4 LG
LG ewebatala LG G4s, onye nọchiri LG G3s yana nwanne ya nwoke nke tọrọ na ọkwa ụlọ ọrụ, LG G4. Anyị na-ewetara ya isi e ji mara.
Ngosipụta ngosi nke Samsung Galaxy Note 5 dị elu na etiti Ọgọst
O doro anya na ngosipụta nke Samsung Galaxy Note 5 nke afọ a ka ga-adịrịrịrịrị na etiti August 2015.
Facebook ga - ewepụta nhọrọ ọhụrụ iji chịkwaa nri akụkọ na izu ndị na - abịa.
Google ka weputara nkwụnye ọrụ nke na-egbochi iji WiFi na Chromecast. Ọ na-ejikọ kpọmkwem na Router na ngwaọrụ Chromecast.
Geeksphone mechiri ọnụ ụzọ ruo mgbe ebighị ebi
Geeksphone mechiri ụzọ mechie ọtụtụ ndị mmekọ ya na ndị ọzọ! Mụ na ndị ọzọ nwere Silent Circle's Blackphone.
[APK] Google Messenger 1.4 na-abịa na izipu ọnọdụ, akwụkwọ mmado na ndị ọzọ
Google Messenger na-abịa na nsụgharị ọhụrụ, 1.4, nke na-eweta nnyefe ọnọdụ, akwụkwọ mmado na mmanya mpịakọta na mkparịta ụka.
LG G4 Beat na-eme mbido ya na ihuenyo 5,2 na inch Snapdragon 615
LG G4 Beat ma ọ bụ G4s bụ nzọpụta ọhụụ nke Korea iji weta atụmatụ adịchaghị na ngwugwu n'ime etiti.
HTC, mmalite nke njedebe nke nnukwu ụlọ ọrụ
HTC agbanweela amụma ya maka nkeji iri na ise a mgbe nsonaazụ adịghị mma gbasara ahịa nke ngwaahịa ya.
Gọọmentị Russia na-ebipụta akwụkwọ ntuziaka iji gosipụta otu esi ewepu onwe gị. Ọ bụghịkwa egwuregwu
Mịnịstrị na-ahụ maka ime obodo Rọshịa ebipụtala ọtụtụ eserese na-egosi etu esi ewepụtacha onwe mmadụ.
Ihe mbido ihe emelitere na 3.5 site na iji ọhụụ ọhụrụ na-eme ngwa ngwa dị ka nnukwu echiche
Action obubata na-emelitere na a oké novelti dị ka a Quickbar ma ọ bụ omenala mmanya ebe ị nwere ike itinye ụzọ mkpirisi ka Facebook ma ọ bụ Twitter.
[APK] A na-emelite Playlọ Ahịa Google Play na ndozi anya
Playlọ Ahịa Google na-aga n'ihu na-egosipụta oke nkọwa ya na mmụba abụọ ọhụụ na akụkụ nke ngwa.
OnePlus 2 ga - abia na 4 GB nke Ram
Onye OnePlus 2, flagship ọhụrụ nke ụlọ ọrụ OnePlus, ga-enwe 4 GB nke LPDDR4 ebe nchekwa, nke kachasị mma n'ahịa.
Sony adịghị ezube ire nkewa ama ya, mana n'ụzọ ọzọ, ọ ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na ya maka afọ ole na ole sochirinụ.
Foto dị na Instagram gbanwere mkpebi 1080 × 1080 na gam akporo
Instagram ekpebiela ime ka mkpebi nke ihe onyonyo ahụ gaa na 1080x1080 iji gosipụta foto ndị anyị kesara.
Anyị amatala ihe niile gbasara Samsung Galaxy Note 5 ọzọ
More leaks banyere Samsung Galaxy Note 5 na-esote, oge a ka anyị ga-agwa gị ihe ọdịdị ya ga-adị ka ya na ihe ọzọ.
Kedu ihe na-echere anyị na Minecraft Pocket Edition 0.12
0.12.dị 2015 ga-abụ otu n'ime mmelite kasịnụ na Minecraft Pocket Edition. Kwupụtara kemgbe MineCon XNUMX.
Na-atụ egwu ekwentị gị? Ntuziaka na usoro aka na-ezu ohi
Ohi Smartphone bụ ihe a na-ahụkarị. Iji gbochie, anyị na-akwado ngwa kachasị mma ịchọta ekwentị gị ebe ọ bụla ọ dị.
Ntughari nke YouTube rue 60fps na gam akporo: site na mbido rue ugbu a.
Anyị na-enyocha mgbanwe nke usoro ikpo okwu kachasị ewu ewu na ịntanetị, YouTube, site na mmalite ya na 60fps agbakwunyere na gam akporo.
Na a nnọọ obere oge na-ekere òkè animated gifs si Facebook ozi ga-adị mfe
Facebook chọrọ ka ọ dịrị ya mfe izipu faịlụ GIF eserese na kọntaktị nwere ọrụ abụọ arụpụtara yana bọtịnụ raara onwe ya nye.
Egwuregwu TellTale 'Minecraft: Ọnọdụ akụkọ na-abịa gam akporo ma emechaa n'afọ a
Minecraft: Akụkọ akụkọ site na egwuregwu TellTale ga-ewe gị site na akụkọ na-akpali akpali site na ebe ndị a ma ama na ụwa gị.
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ Casio Smartwatch n’ahịa mba ụwa
Dabere na Kazihuro Kashio, onye isi ala Casio, n'afọ na-esote afọ 2016 anyị ga-enwe Casio Smartwatch mbụ, Casio smartwatch mbụ.
Oppo Mirror 5s, a ufọt ufọt nso na a n'ezie mara mma imewe
Oppo ka kpughere Oppo Mirror 5s ọhụụ. Ọnụ na-eji atụmatụ na atụmatụ mara mma nke ukwuu
Ekwentị ndị China, uru na ọghọm ya
Anyị na-agwa gị niile uru na ọghọm dị na China mobiles nwere na ihe bụ ihe ndị ị ga-elebara anya mgbe ịzụrụ ha.
Ekwentị gị ọ na-ekpo oke ọkụ? - Ndụmọdụ iji dozie ya
Ọ bụrụ na ekwentị gị adịghị nwayọ n'ihi ikpo oke ọkụ, ebe a anyị kọwara otu esi edozi ya site na iji ngwa njikwa njikwa kachasị mma.
A ga-ahapụ ụlọ nchekwa Fallout na gam akporo na August
Ọgọstụ na-esote anyị ga-enwe ike ịnweta Fallout Shelter site na Storelọ Ahịa Play iji mụta na ọnọdụ ihe ọ pụtara ibute ebe nchekwa nuklia.
Mmeri ekweisi RHA MA750i site na iji gam akporo gam akporo ọhụrụ
isonye na asọmpi Androidsis ebe, ekele na mmekota na RHA, anyị raffle a adịchaghị RHA MA750 m ekweisi akpọrọ ọnụ na 99 euro.
Nke a bụ ọhụụ Panasonic ọhụrụ, Panasonic P55
A maara Panasonic nke ọma na ụwa niile site na ngwa ya na telivishọn. Ugbu a, ọ na - ewepụta amamịghe etiti, Panasonic P55.
Ugbu a Google Ugbu a na-echeta ngwa ndị ịchọrọ ịmalite maka ụfọdụ iwu olu
Google Ugbu a na-aga n'ihu na-eme ka anyị nwee mmetụta na ọ ka mara ihe. Ugbu a, ọ ga-echeta ngwa ahọpụtara ahọpụrụ na otu olu iwu.
Xiaomi na-ere nde 34,7 nde ama ọkara mbụ nke 2015
Xiaomi nwere ọnụ ọgụgụ dị egwu maka ọrịre nke smartphones na ọkara nke mbụ, ruru nde 34,7. Ọnụ ọgụgụ dị oke egwu.
Ngwa YouTube enyeworị nkwado maka ọkpụkpọ vidiyo na 60 fps
Site na ngwaọrụ gam akporo ị nwere ike ugbu a kpọọ vidiyo na 60 fps iji nwee ọmarịcha njirimara dị mma nke na-emesi mmiri ike.
Gello, ihe nchọgharị weebụ ọhụrụ nke CyanogenMod dabere na Chromium na nhazi
Gello bụ onye nrụpụta ihe nchọgharị weebụ nke CyanogenMod nke na-emesi ike ịhazi ma dabere na Chromium.
Google Earth na-agba afọ iri na nnukwu ọhụụ: Voyager
Voyager bu ihe ohuru nke Google Earth nke na eweputa uzo ise di egwu iji choputa uwa gbara anyi gburugburu.
Huawei nwere ike iweta ọtụtụ nsụgharị nke Honor 7
Ugbu a, ka ngosipụta nke Huawei Honor 7 na-eru nso, asịrị banyere njedebe ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia anaghị akwụsị ịbịaru.
A na-agbazi benchmarks Snapdragon 820
Qualcomm Snapdragon 820 processor benchmark ka agbapuwo, Qualcomm SoC ohuru nke kwere nkwa kari oru oma karie 810.
Nke a bụ otu Google si eji rọbọt iji nwalee ngwa gam akporo gị maka lag
Google nwere robot nke raara onwe ya nye iji nwaa uzo nke ihuenyo ya na otutu ihe di iche iche na ngalaba ya.
Ndị a bụ nkọwa nke Doogee F3 na-esote
Companylọ ọrụ China bụ Doogee nwere akara ngosi ya ọzọ, bụ Doogee F3, na nsọtụ swiiti.
Hugo Barra na-ekwu maka ọdịnihu nke Xiaomi na United States
Hugo Barra, onye isi oche nke Xiaomi, na-ekwu banyere ọdịnihu nke Xiaomi na United States na ụfọdụ nkọwa gbasara njirimara nke Xiaomi Mi Band ọhụrụ
Kwadebe onye dike gị n'efu site na ịdebanye aha maka MOBA Vainglory na July 2
A ga-ahapụ Vainglory na July 2. Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi nweta dike kachasị amasị gị site na ịdenye aha maka mbido ya na weebụsaịtị ahụ.
Inddị maka gam akporo na-enweta ike ịkekọrịta ederede na nyocha na ndị enyi
Versiondị ọhụrụ nke Kindle na-eweta atụmatụ ọhụrụ ọhụụ abụọ na-atọ ụtọ iji kesaa nhọpụta na kọntaktị ndị gara aga na kọntaktị na-enweghị ha ịbanye.
Ihe ọhụrụ Snapdragon sitere na usoro 600 pụtara na benchmark
Ihe nhazi ohuru nke Snapdragon 600 apụtawo na benchmark. Ihe nhazi ohuru a kwere nkwa oru oma na oru oma batrị.
Emepụta ihe egwu egwu site na iji 3D ebi akwụkwọ
Otu ngwa ọzọ nke ndị nbipute 3d abụghị, ma ọ bụ pere mpe, karịa imepụta ngwa egwu.
Ememe Ncheta Ndagwurugwu ya na mgbasa ya Ida's free na Amazon
Site na ngwa ngwa ngwa Amazon ị nwere ike ị nweta ọhụụ ọhụụ Ida's Dream na Ncheta Ndagwurugwu, otu egwuregwu kacha mma.
Nwere ike mezie ozi ịntanetị na ama gị na Gmail Igbe mbata
Igbe mbata na-enyeworị atụmatụ a iji mezie ozi ịntanetị sitere na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo mgbe ịmalite ya ụbọchị gara aga na ụdị weebụ.
Facebook Messenger agaghị achọ akaụntụ facebook iji ya
Facebook enyela ohere na United States, Canada, Venezuela na Peru ịbanye na Messenger na-enweghị akaụntụ Facebook.